Qoyska Caroline Mwatha oo doonaya in meydkeeda si madax bannaan loo baaro – The Voice of Northeastern Kenya
Qoyska Caroline Mwatha oo doonaya in meydkeeda si madax bannaan loo baaro
Hay’adaha u ololeeya xuquuqul aadanaha iyo qoyska ay ka baxday gabadh lagu magacaabo Caroline Mwatha oo maalmo ka hor la waayay ayaa doonaya in meydkeeda oo dhawaan la helay uu baaritaan ku sameeyo khabiir madax bannaan.
Shalay ayuu qorshuhu ahaa in sarkaal dowladda u qaabilsan baaritaanada lagu sameeyay meydadka laguna magacaabo Dr. Johansen oduor uu howshaasi guda galo balse maynan dhicin maadaama sida la sheegay uu ku mashquulsanaa magaalada Naivasha ee ismaamulka Nakuru.
Codsiga xubnaha qoyska Caroline ayaa ku soo aadaya maalin un kaddib markii booliska ay sheegeen inay haweeneydan dhimatay xilli ay doonaysa inay iska soo riddo uur shan bilood ah oo uu u yeelay nin ay saaxiibbo yihiin.
Ciidamada dembi barista ee dalka ayaa sido kale soo saaray fariimo ay sheegayaan inay ka turjumayaan sheekooyinkii dhexmarayay Caroline iyo saaxibkeed.
Hasa ahaate qoyskeeda iyo ninka ay wada joogaan oo xilligii la waaynayay ku maqnaa Dubai aynan u cuntamin warbixin laamaha ammaanka.
3 qof oo lala xariirinayo dilkii Caroline Mwatha oo ahayd gabadh u ololeysa xuquuqul insaanka ayaa shalay la soo taagay maxkamada ismaamulka Kiambu.
Maxkamadda ayaa amartay in eedeysanayaasha ay xabsiga ku sii jiraan muddo 14 maalmood ah baaritaano dheeraad ah loogu sameeyo.
Gabadhan oo muddo hal toddobaad ah la raadinayay ayaa ugu dambeyntii meydkeeda laga helay goobta meydadka la dhigo ee caasimadda dalka.
Waxaana durbaba soo baxay warar is-khilaafsan oo ku aaddan cidii halkaasi meydkeeda halkaasi geystay iyo qofkii wehelinayay xili sida boolisku ay sheegayaan ay tagtay xarun caafimaad si ay isaga soo xaaqdo uur ay lahayd.
← Kalkaaliyayaasha oo ku gacan seyray amar ka soo baxay madaxweynaha dalka
Ciidanka AMISOM iyo AL-shabaab oo ku dagaalamay gobolka Hiiraan. →